Iipilisi ezingcono kakhulu zokulahleka kweenwele kubantu: i-Cortexolone 17α-propionate powder (CB-03-01)
/Blog/I-Cortexolone 17α-propionate/Iipilisi ezingcono kakhulu zokulahleka kweenwele kubantu: i-Cortexolone 17α-propionate powder (CB-03-01)
ezaposwa ngomhla 06 / 10 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Cortexolone 17α-propionate.
Yonke into ngo-Cortexolone 17α-propionate powder
1.Yintoni ebangela ukulahleka kweenwele?
I-2.Iyiphi indlela yokwelapha Ubunzima beentsimbi?
3.Yintoni i-Cortexolone 17α-propionate?
4.yintoni umehluko phakathi kwe-RU58841 kunye ne-CB-03-01?
5.Kubani ukuthenga i-Cortexolone 17α-propionate powder?
Umthengisi we-powder 6.17A-propionate
Cortexolone 17α-propionate powder Abalinganiswa basisiseko:
I-pattern-male pattern, ebizwa ngokuba yi-androgenic alopecia, ithintela inxalenye ebalulekileyo yindoda kunye nabesifazane abambalwa. Kule meko, i-genetic heritage factors causes the follic hair in the head to be sensitive to the presence of hormone called dihydrotestosterone (DHT). I-enzyme ebizwa ngokuba yi-5-alpha-reductase iphenduka i testosterone ibe yi-DHT. I-DHT ibophelela kwi-androgen receptors kwiintlobo zezinwele. Kwiintsholongwane zentloko, ukutshatyalaliswa kwexesha elide kwi-DHT kubangela ukuba ubugqwetha bentloko buchithe ixesha lokuphumla kunokuba zikhule iinwele, kwaye emva kwexesha, i-follicle iqhuba inkqubo encinci ye-miniaturization, ekugqibeleni ivelise iincinci ezincinci ezibizwa ngokuba yi-vellum.
Abaphandi abaninzi baye bafumanisa i-androgen receptors njengeenjongo ezifanelekileyo zokunyanga i-androgenic alopecia. Ukuba i-androgen receptors kwiintlobo zezinwele ziyakhutshwa okanye zikhubazeke, ngoko i-DHT ayikwazi ukuchaphazela iifollic izinwele. Nangona kunjalo, ukulawulwa kweenkqubo ze-androgen receptor blockers, ezinjengezilwanyana ezisetyenziselwa ukwelapha umdlavuza wesifo seprotate, kubangele imiphumo embi kakhulu. Ekubeni ukuhluma kuthintela ulusu, olufikeleleka ngokulula, isicelo se-topical ye-androgen receptor blocker kufuneka imise inkqubo yokubala ngaphandle kokubangela nayiphi na imiphumo yecala. Abaphandi sele sele bafumanisa iamolekyu esebenza ngokuchanekileyo ngale ndlela.
Akungabazeki ukuba ii-antiandrogens ziphakathi kweempiliso ezisebenzayo kwi-balding yamadoda (i-androgenetic alopecia, i-AGA) kulo nyaka. Ama-Antiandrogens afana ne-finasteride kunye ne-dutasteride yokuyeka iindleko zeenwele kwi-high proportion yabasebenzisi kunye nokuphucula uxinzelelo kwimeko efanelekileyo. Nangona kunjalo ababancedi bonke abantu kunye nemiphumo emibi (ukungasebenzi ngokwesini, ukuxinezeleka, njl. I-androgens ekhuselekile yokukhusela, ukuba isebenze kakuhle, iya kuba yongezelela kakhulu kunyango esisebenzisayo ngoku.
Siye sabona umdla olwandayo kwi-anti-androgens ye-topical kwiminyaka yakutshanje, kuquka i-agents ezifana ne-finicalide, i-topic Fluridil, i-RU 54481 kunye nezinye.
Kuza kubekho i-androgen echaseneyo kunye ne-FDA yokusetyenziswa kwindoda ye-AGA. Kwiingcamango ezilungileyo ze-androgen ezifunekayo kufuneka zibe nomsebenzi onamandla ovalwe elukhumbeni, abanakho iimpembelelo zesistim kunye nokunyamezeleka.
I-Cortexolone 17α-propionate (igama lekhowudi yophuhliso CB-03-01; amagama amashishini atyalayo Breezula powder(i-acne), Winlevi powder(forrogenic alopecia)), okanye 11-deoxycortisol 17α-propionate, i-antrogenal synthetic steroidal antiandrogen - ngokukodwa, i-androgen receptor antagonist - ephantsi kokuphuhliswa yiCassiopea kunye ne-Intrepid Therapeutics ekusebenziseni njengamachiza e-headical ekwenzeni unyango lwe-androgen kunye ne-acne vulgaris kunye ne-androgenic alopecia . Ngu-C17α propionate ester ye-11-deoxycortisol (cortexolone); I-C17α esters ye-11-deoxycortisol yayifumaneka ngokungalindelekanga ukuba ibe ne-antiandrogen, kunye ne-cortexolone 17α-propionate CAS 19608-29-8 ikhethwe ukuphuhliswa ngokusekelwe kwiprofayili yayo yezobisi.
Kwiingqungquthela, isilwanyana sitholakale sinomsebenzi ochanekileyo we-antiandrogen wendawo, kodwa umsebenzi ongenamsebenzi wokulwa ne-antiandrogen xa ulawulwa nge-injection engathandanga. Ukongeza, i-cortexolone i-17--propionate ayikho i-progonadotropic, iphakamisa ukuba iyakhetha ngokukhawuleza. Kwi-bioassay, ubungqina bombongo bukhulu kuneyona progesterone, flutamide, kunye ne-finasteride kwaye yayilingana neyo-acetate ye-cyproterone.
I-CB-03-01 yinkomfa ye-anti-androgen enegunya lobunikazi kunye neCosmo kwaye iphandwa phantsi kwegama elithi Breezula. Ngu-antrogen receptor antagonist kunokuba i-inhibitor ye-5 alpha reductase. Unomngenelo wokungena ngesikhumba. Izifundo ziyaqhubeka ukuba zichonge ukuba isilwanyana sinomvuzo kumbhinqo wesimboli wesilisa okanye cha. Enyanisweni, uphando lweveki lwe-26 nge-Intreprid ngoku liya kuqhathaniswa ne-5% CB-03-01 kwi-5% ye-minoxidil kunye ne-placebo. Kuya kuba lunomdla ukubona ukuba i-CB-03-01 inayo nayiphi na inzuzo kwaye ukuba kunjalo, ingaba njani ifanisa ne-minoxidil yama-topical.
Kuza kubekho, kukho izifundo ezimbini kuphela ezipapashwe kwiincwadi zonyango malunga ne-CB-03-01. Ngoko sinolwazi oluncinane kwiziyobisi. Kubonakala ukuba i-CB-03-01 ixiliswa ngokukhawuleza kwi-cortexolone engenayo nayiphi na into elwa ne-androgen. Okwesibini, kubonakala ukuba i-CB-03-01 inefuthe elichasayo elingaba luleke ekuphatheni i-AGA eyaziwa ukuba inxulumene nokuvuvukala kwiimeko ezininzi. Uphononongo kwierati kunye noonogwaja kubonise ukuba akuyiyo into enomlomo. Uphando lwabantu alubonisanga naziphi na iziganeko ezimbi.
I-4.Izonyango zokuphulukana kweenwele zonyango: yintoni umehluko phakathi kwe-RU58841 ne-CB-03-01?
I-RU58841 i-androgen receptor blocker eyafunyanwa kuqala kwi-1990s yokuqala, kwaye ifundwe ngokubanzi kwiimpawu zezilwanyana. Xa isetyenziswe kwi-topically, iphumelela kakhulu ekunqandeni ukuqhubela phambili kwe-balding kwaye iyakwazi nokukhuthaza ezinye iinwele zokukhula kwakhona. Akukho miphumo yecandelo le-systemic efunyenwe kwiinkwenkwe eziphathwa ngophando nge-RU58841. Nangona kunjalo, ngenxa yemibandela engahambelani ne-RU58841 ngokwayo, ayizange ihambe kwinkqubo yokuhlola yabantu ngokusemthethweni ukuze ivumeleke ukuba ivunyiwe yi-FDA kunye nezinye i-arhente zokulawula zokuthengisa njengendlela yokunyuselwa kwebala. Itholakale ukuthengwa njengemichiza yophando, kwaye abaninzi abantu baye basebenzise ukuphatha ibhalti kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kubikwa ukuba kuyasebenza kakhulu ekunqandeni ukulahleka kweenwele kunye nemiphumo engaphantsi. Abantu abambalwa babika ukuba ivuselela iinwele kwakhona ukukhula kwakhona.
I-Cortexolone 17 Alpha-Propionate, okanye i- "CB-03-01"
I-CB-03-01 yi-blocker ye-androgen ye-blocker yokuqala eyafumaneka kwi-2000s. Izifundo zokuqala kwiimpawu zezilwanyana zifumene ukuba zingavimbela i-androgen receptors xa isetyenziselwa phezulu kodwa kungenjalo xa inikezelwa inkqubo. Ukungabikho komsebenzi xa sisetyenziselwa indlela yokubonakalisa ukuba akukho miphumo ye-systemic anti-androgenic kwimigodi ejoyiweyo kunye neziyobisi. Ukukwazi ukuvimba umsebenzi we-androgen wachazwa ngabaphandi bokuqala njengamaxesha amathathu anamandla ngaphezu kwe-flutamide. Inyaniso yokuba ayinayo imisebenzi echasene ne-androgenic xa isetyenziselwa indlela yokusebenza mhlawumbi ngenxa yokuba emva kokungena emzimbeni, ngokukhawuleza kufakwe i-fomatili kwifomu engasebenzi.
Izifundo zakuqala ze-RU588541 zafanisa nokusebenza kwazo kwezinye i-androgen receptor blockers, ezifana ne-flutamide, i-nilutamide, ne-bicalutamide. Xa kuthathwa ngendlela eyiyo, i-RU58841 ineempembelelo ezinamandla ezifana nayo nayiphi na i-blocker receptionor blocker. Kwizifundo ze-RU58841, kwafunyanwa kwi-blocker enamandla kakhulu ye-androgen receptors kunanoma yiyiphi i-blocker receptor eyaziwayo ngaphambili; Enyanisweni, abaphandi baphetha ngokuthi "yi-antiandrogen enamandla kakhulu" eyaziwayo ngelo xesha (1998), kunye namaxesha e-100 umsebenzi we-flutamide, ebonisa ukuba i-blocker receptor blocker ephezulu kakhulu kune-CB-03-01.
Nangona abo batyhini babengazange bafaniswe ngokuthe ngqo, bobabini bavavanywa kwiimvavanyo ezifanayo malunga nokusetyenziswa kweziyobisi. I-Hamsters ineengqungquthela ezikhethekileyo kwesikhumba ephuhliswayo ekuphenduleni amahomoni angamadoda. Ukukwazi ukusetyenziswa kwezidakamizwa ezichasene ne-androgenic ukuvimba ukuphuhliswa kwe-gland ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kwi-laboratory. Kwiimvavanyo ze-hamster zesikhumba sekhanda, kwi-dose ye-400 microgram ngosuku, i-CP-03-01 yayingasebenzi ngaphantsi kwe-flutamide (i-84% ne-55%, ngokulandelanayo) ekuthintela uphuhliso loluntu ekuphenduleni amahomoni angamadoda kodwa kusebenza ngakumbi kune-acetate ye-cyproterone (kuphela i-93% yokucima)
Nangona kunjalo, kwi dose ye-micrograms ze-10 kuphela ngosuku, i-RU58841 inokukhusela ukuphuhliswa kwe-gland nge-60%, kwaye yafunyanwa ibe yipalikhi ye-androgen ye-receptor engaphezulu kunokuba i-flutamide okanye i-acetate ye-cyproterone. Ukuncitshiswa okulula kubonisa ukuba yinto enamandla kakhulu kune-CP-03-01.
Ngokungafani ne-RU58841, ebonakala ngathi yashiywa yinkampani yezobisi, i-CB-03-01 ifundiswa ngamandla, ngokuyinhloko njengonyango lwe-acne. I-CB-03-01 yenziwa yiCosmo Pharmaceuticals, inkampani yaseNtaliyane. Le nkampani inikwe ilayisenisi kwi-Medicis kwi-2012 yokuphuhlisa e-US. Izifundo zokuqala zonyango njengoko unyango lwenkunkuma lufuna indlela ekhethekileyo yokuhambisa isilwanyana kwiifolisi zeenwele usebenzisa i-current current (iontophoresis), kodwa emva kokuziswa, kubonakala kusebenza ngokufanelekileyo ekuphatheni iintlungu. Nangona kunjalo, izigulana ezimbalwa ziya kukulungele ukuphathwa ngamanyathelo eveki kwiminyaka eminyaka yi-iontophoresis.
Uphononongo luhlolisise ukusebenza kwe-CB-03-01 kumadoda e-40 nge-androgenetic i-alopecia ibanga 1-4 ngokwemilinganiselo ye-Hamilton, nakwi-30 abafazi be-menopausal nge-androgenetic alopecia ibanga le-1 ngokomlinganiselo weLudwig.
Inkcazo yeCosmo kwi-2013 ibonisa ukuba isenokusombulula ingxaki yokuhambisa. Baye benza iimvavanyo zeplameation, kwaye babonise ukuba isisombululo se-5% kwisibisi esikhethekileyo sikhilimu sinokukwazi ukungena kwiifollic hair. Baye benza utywala kunye novavanyo lokucasula kwiingulube. Intshumayelo ye-2013 iphakamise ukuba yayiza kuqaliswa izifundo kwizisebenzi zokuzithandela zabantu. Ingxelo yakutshanje yenkampani ibonise ukuba iziphumo zesilingo xa kuthelekiswa ne-minodoxil kwi-voluntary 120 ziza kufumaneka ngasekupheleni kwe2015.
Nangona zombini i-RU58841 kunye ne-CB-03-01 zifumaneka ukuthengwa njengemichiza yophando ekusebenziseni ngabanye, kunzima ukuba umthengi ongathengiyo "azame" CB-03-01 ekhaya. Ngokungafani ne-RU58841, enokutshatyalaliswa kotywala okanye ezinye izithuthi ezifumanekayo, i-CB-03-01 ibonakala ifuna ukulungiswa kwi-cream ephathekayo ukwenzela ukuba ingene kwiifollic hair. Ngoko ke, ngenxa yokuba akukho zifundo zeCosmo ezinokulahlekelwa kwintlungu ziye zashicilelwa njengangoku, kwaye akukho namnye oye wakwazi "ukuzama" i-CB-03-01 ekhaya, akucaci ukuba ihambelana njani ne-RU58841 yokuphatha ibhaling. I-CB-03-01 ibonakala inobomi obufutshane obuncinane kunama-RU58841, kwaye inokuba yinto encinci ye-blocker ye-androgen receptors. Xa isetyenziswe kwi-topically, akukho mveliso ifanele ibonise nayiphi na imiphumo yesango.
Kulula kakhulu Thenga i-Cortexolone 17α-propionate powder. I-intanethi iyaziwa njengendlela ekhawulezayo kunye nekhuselekileyo yokuthenga iimveliso ezifana CB-03-01 CAS 19608-29-8. Unikwa ngeendlela ezahlukeneyo zokuthenga kwakho. Okuninzi, uya kunikezwa izaphulelo nganye kwigrama oyithengayo. Nesiqinisekiso sokubuyiswa kwemali sinikezelwa. Kodwa ukuqwalasela abathengisi be-intanethi, kufuneka uqaphele ngokunjalo. Kungakhathaliseki ukuba ixabiso legrama liphantsi kangakanani, elona lihle emehlweni akho, kufuneka lihlolwe kakuhle. Ngenxa yoko, kufuneka ukwazi imvelaphi yomthengisi wokuqala ngaphambi kokunika ithemba lakho.
6.Izinzuzo Thenga i-Cortexolone 17α-propionate powder kwi-AAS Cortexolone 17α-propionate powder Khungani:
tags: BHAZA I-Cortexolone 17A-propionate powder, Cortexolone 17α-propionate powder
I-aprepitant powder esetyenziselwa isicupunu sokusasazeka kunye nokuhlanza	I-crizotinib powder (i-877399-52-5) yenze i-agent anti-cancer